जग्गाधनी पुर्जा चल्तीमा ल्याउन दबाब दिन सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा
प्रस, निजगढ, १५ असार/ उच्चस्तरीय सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बाराले व्यवस्थित बसोवास प्रयोजनका लागि वितरण गरेको जग्गाधनी पुर्जा हालसम्म पनि चलनचल्तीमा नल्याइएको जनाउँदै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। शनिवार निजगढ गाविसको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सङ्घर्ष समिति निजगढले सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। वितरीत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याउन, विभागीय परिपत्रको कार्यान्वयन गर्न, ०६७ को सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले नियमन गरी तयार पारेको पुर्जा वितरण गर्नलगायतका माग राख्दै सङ्घर्ष गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। घोषित कार्यक्रममा यही असार २४ गते भूमि सुधार कार्यालय बारा, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा १/१ घण्टा घेराउ गर्ने जानकारी दिएको छ। त्यसपछि कुनै सुनुवाइ नभए लोकमार्गको निजगढ सडकमा चक्काजामसमेत गर्ने चेतावनी दिएको छ। सम्बन्धित माथिल्लो निकायहरूबाट कुनै बाधा अड्चन नरहेपनि मालपोत कार्यालय बाराले विभिन्न बहाना बनाउँदै पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याउन र वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको सङ्घर्ष समितिले आरोप लग
मधेसी दलहरूबीच एकीकरणको प्रयास हुँदै– महन्थ ठाकुर
प्रस, जीतपुर, १५ असार/ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सबै मधेसवादी दललाई एकीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले बहुमत नपाएकै कारण संविधान नबनेकोले एकीकरण गरी चुनावमा जाने पहल शुरू गरिएको अध्यक्ष ठाकुरले बताए। बारा क्षेत्र नं. ४ को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि अध्यक्ष ठाकुरले ठूला दलहरूले मधेस प्रेमबारे गरेको टिप्पणीबाट आफूलाई दु:ख लागेको बताए । उनले आगामी संविधानसभा चुनावमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भरमग्दुर प्रयास गर्न आग्रह गरे। सो अवसरमा तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनलले आगामी संविधानसभाको चुनावमा गैरमधेसी दललाई मधेसमा धूलो चटाउने बताए। उनले मधेसमा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको जमानत जफत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। क्षेत्रीय अधिवेशनले पुन: सीतारामप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय क्षेत्रीय समिति सर्वसम्मतिबाट चयन गरेको छ । नवगठित क्षेत्रीय समितिको उपाध्यक्ष फिरोज अन्सारी, अच्छेलाल यादव, अनिल राम र अशोक मण्डल, कोषाध्यक्ष उर्मिला देवी,
वीरगंजमा राष्ट्रव्यापी खुल्ला कुश्ती छनोट प्रतियोगिता शुरू
प्रस, वीरगंज, १५ असार/ वीरगंजमा आजदेखि सञ्चालित दुई दिने राष्ट्रव्यापी खुल्ला कुश्ती छनोट प्रतियोगिता शुरू भएको छ। कबर्ड हल वीरगंजमा आयोजित कार्यक्रममा एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार दिनेशचन्द्र गिरीले छनोट प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन समारोहमा पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमय, नेपाल कुश्ती सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारी, जिप्रका पर्साका प्रनाउ मुकेशकुमार सिंह, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष सुरेश गिरी, सङ्घका महासचिव मुमताज अलीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा सङ्घका उपाध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले वैदेशिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सबै जिल्लाका खेल प्रशिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्ने, खेललबाई गाविसस्तरबाट शुरू गर्नुपर्ने नीतिनियम बनाउनुपर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा चर्चा गरेका थिए। खुल्ला कुश्ती छनोट प्रतियोगितामा १४ जिल्लाका ८५ जना खेलाडी र ११ जना प्रशिक्षक सहभागी छन्। आज पहिलो दिनको छनोट प्रतियोगितामा ५५ किलो तौल समूहमा पर्साका नरेश यादव, जय
पर्सा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र बनाऔं
प्रमोद पौडेल मर्निङ वाक गर्न मानिसहरू बिहान झिसमिसैमा उठ्ने गर्छन्। बिहानको स्वच्छ हावाले दिनभरिका लागि शरीरमा चुस्तीफुर्ती ल्याइ काम गर्न ऊर्जा प्रदान गर्छ। मधुमेह, माटोपन, उच्च रक्तचापलगायतका बिरामीहरू बिहानपख मर्निङ वाक गरिरहेका भेटिन्छन्। वृद्धवृद्धाहरू पनि आ–आफ्नो तालमा घुमिरहेका हुन्छन्। बिहानपख स्वच्छ वातावरणमा रमाउनेहरूको उपस्थिति वीरगंज शहरमा बाक्लिदै गइरहेको छ। तर पछिल्ला समयदेखि स्वच्छ हावामा मर्निङ वाक गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी देखापर्न थालेको छ। यसको प्रमुख कारण खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नु हो। आफ्नो घरमा भएको शौचालयलाई प्रयोग नगरी खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नाले वातावरण नै दुर्गन्धित भएको छ। मर्निङ वाक गर्दा दायाँ बायाँ राम्ररी हेरेर, मुख र नाक छोपेर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ। जथाभावी दिसा गर्नाले वातावरण त दूषित भएकै छ, वीरगंज शहरको सरसफाइमा पनि असर पुर्‍याएको छ। खुल्लारूपमा दिसा गर्ने परिपाटि शहरभन्दा पनि ग्रामीण भेगमा बढी हुने गरेको छ। गाउँमा मानिसहरू घर त बनाउँछन्, तर शौचालय बनाउन चाहँदैनन् र नजिकको सडक, खेत, नदी, खोल्सामा गएर मलमूत्र त्याग गर्ने गर्छन् । यसरी जथाभावी दि
अध्यात्म रामायण– नेपाली र भोजपुरी रूप
उमाशङकर द्विवेदी भगवान् रामचन्द्रको परम पवित्र गाथा साक्षात् भगवान् शङकरले आफ्नी प्रेयषी आदिशक्ति पार्वतीलाई सुनाएका थिए। यो आख्यान ब्रह्माण्डपुराणको उत्तरखण्ड अन्तर्गत आएको छ। यसमा परम रसायन रामचरित्रको वर्णन गर्ने क्रममा विभिन्नथरीका प्रसङग प्रस्तुत गरेर भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति र सदाचारसम्बन्धी दिव्य उपदेश दिइएको छ। विविध विषयहरूको विवरण रहेपनि यसमा प्रधानता अध्यात्म तत्त्वको विवेचन रहेको हुनाले नै यसलाई ‘अध्यात्म रामायण’ भनिएको छ। अध्यात्म रामायण मूलत: संस्कृत भाषामा रहेको भएपनि विभिन्न कालक्रममा यो विभिन्न लोकभाषाहरूमा पनि भावानुवाद, शब्दानुवाद, छायानुवाद जस्ता अनुवादहरू गरिएका पाइन्छन्। यहाँ भानुभक्त आचार्यद्वारा अध्यात्म रामायणको नेपाली भावानुवाद तथा मुकुन्द आचार्यद्वारा भानुभक्तीय अध्यात्म रामायणको भोजपुरी भाषामा शब्दानुवादको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। अयोध्याकाण्डको एउटा प्रसङगको मूल अध्यात्म रामायणको संस्कृतका श्लोकहरू निम्न छन्– इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्रुपरिप्लुत:। उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यहम्।। रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्त
प्रस, निजगढ, १५ असार/ उच्चस्तरीय सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बाराले व्यवस्थित बसोवास प्रयोजनका लागि वितरण गरेको जग्गाधनी पुर्जा हालसम्म पनि चलनचल्तीमा नल्याइएको जनाउँदै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । शनिवार निजगढ गाविसको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सङ्घर्ष समिति निजगढले सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । वितरीत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याउन, विभागीय परिपत्रको कार्यान्वयन गर्न, ०६७ को सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले नियमन गरी तयार पारेको पुर्जा वितरण गर्नलगायतका माग राख्दै सङ्घर्ष गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । घोषित कार्यक्रममा यही असार २४ गते भूमि सुधार कार्यालय बारा, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा १/१ घण्टा घेराउ गर्ने जानकारी दिएको छ । त्यसपछि कुनै सुनुवाइ नभए लोकमार्गको निजगढ सडकमा चक्काजामसमेत गर्ने चेतावनी दिएको छ । सम्बन्धित माथिल्लो निकायहरूबाट कुनै बाधा अड्चन नरहेपनि मालपोत कार्यालय बाराले विभिन्न बहाना बनाउँदै पुर्जा चलनचल्तीमा ल्याउन र वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको सङ्घर्ष समितिले
प्रस, जीतपुर, १५ असार/ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सबै मधेसवादी दललाई एकीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले बहुमत नपाएकै कारण संविधान नबनेकोले एकीकरण गरी चुनावमा जाने पहल शुरू गरिएको अध्यक्ष ठाकुरले बताए । बारा क्षेत्र नं. ४ को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि अध्यक्ष ठाकुरले ठूला दलहरूले मधेस प्रेमबारे गरेको टिप्पणीबाट आफूलाई दु:ख लागेको बताए । उनले आगामी संविधानसभा चुनावमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भरमग्दुर प्रयास गर्न आग्रह गरे । सो अवसरमा तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनलले आगामी संविधानसभाको चुनावमा गैरमधेसी दललाई मधेसमा धूलो चटाउने बताए । उनले मधेसमा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको जमानत जफत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । क्षेत्रीय अधिवेशनले पुन: सीतारामप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय क्षेत्रीय समिति सर्वसम्मतिबाट चयन गरेको छ । नवगठित क्षेत्रीय समितिको उपाध्यक्ष फिरोज अन्सारी, अच्छेलाल यादव, अनिल राम र अशोक मण्डल, कोषाध्यक्ष उर्मिला दे
प्रस, वीरगंज, १५ असार/ वीरगंजमा आजदेखि सञ्चालित दुई दिने राष्ट्रव्यापी खुल्ला कुश्ती छनोट प्रतियोगिता शुरू भएको छ । कबर्ड हल वीरगंजमा आयोजित कार्यक्रममा एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार दिनेशचन्द्र गिरीले छनोट प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमय, नेपाल कुश्ती सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारी, जिप्रका पर्साका प्रनाउ मुकेशकुमार सिंह, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष सुरेश गिरी, सङ्घका महासचिव मुमताज अलीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा सङ्घका उपाध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले वैदेशिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै जिल्लाका खेल प्रशिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्ने, खेललाई गाविसस्तरबाट शुरू गर्नुपर्ने नीतिनियम बनाउनुपर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा चर्चा गरेका थिए । खुल्ला कुश्ती छनोट प्रतियोगितामा १४ जिल्लाका ८५ जना खेलाडी र ११ जना प्रशिक्षक सहभागी छन् । आज पहिलो दिनको छनोट प्रतियोगितामा ५५ किलो तौल समूहमा पर्साका नरेश यादव,
रामवन युवा क्लब विजयी
प्रस, पथलैया, १५ असार/रासस बाराको सिमरामा चौथो लोट्स कप फूटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार सम्पन्न खेलमा रामवन युवा क्लब विजयी भएको छ । सिमरास्थित लोट्स स्कूलको खेल मैदानमा भएको खेलमा रामवनले चादे युवा क्लब सिमरालाई ५–१ को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । रामवनको जीतमा श्याम पराजुली र लक्ष्मण चौधरीले दुई/दुई गोल गरेका थिए । रामवनका रामकुमार श्रेष्ठले टिमका लागि पाँचौं गोल गरेका थिए । खेलमा पराजित भएको चादेका लागि जिते भट्टराईले एक गोल गरे । यसअघि शुक्रवार सम्पन्न खेलमा सिमरा पब्लिक इङ्ग्लिश स्कूलले प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको थियो । सिमरा पब्लिकले सूर्य नेपालमाथि ४–१ गोलले जीत हात पारेको हो । सिमरा पब्लिकलाई जीत दिलाउने क्रममा बसन्त ढकालले दुई गोल गरे भने अर्पण लामा र सुशीलकुमार चौधरीले एक/एक गोल गरेका थिए । सूर्य नेपालका लागि कृष्ण पोखरेलले एक गोल गरेका थिए ।
मर्निङ वाक गर्न मानिसहरू बिहान झिसमिसैमा उठ्ने गर्छन् । बिहानको स्वच्छ हावाले दिनभरिका लागि शरीरमा चुस्तीफुर्ती ल्याइ काम गर्न ऊर्जा प्रदान गर्छ । मधुमेह, माटोपन, उच्च रक्तचापलगायतका बिरामीहरू बिहानपख मर्निङ वाक गरिरहेका भेटिन्छन् । वृद्धवृद्धाहरू पनि आ–आफ्नो तालमा घुमिरहेका हुन्छन् । बिहानपख स्वच्छ वातावरणमा रमाउनेहरूको उपस्थिति वीरगंज शहरमा बाक्लिदै गइरहेको छ । तर पछिल्ला समयदेखि स्वच्छ हावामा मर्निङ वाक गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी देखापर्न थालेको छ । यसको प्रमुख कारण खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नु हो । आफ्नो घरमा भएको शौचालयलाई प्रयोग नगरी खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नाले वातावरण नै दुर्गन्धित भएको छ । मर्निङ वाक गर्दा दायाँ बायाँ राम्ररी हेरेर, मुख र नाक छोपेर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । जथाभावी दिसा गर्नाले वातावरण त दूषित भएकै छ, वीरगंज शहरको सरसफाइमा पनि असर पुर्‍याएको छ । खुल्लारूपमा दिसा गर्ने परिपाटि शहरभन्दा पनि ग्रामीण भेगमा बढी हुने गरेको छ । गाउँमा मानिसहरू घर त बनाउँछन्, तर शौचालय बनाउन चाहँदैनन् र नजिकको सडक, खेत, नदी, खोल्सामा गएर मलमूत्र त्याग गर्ने गर्छन् । यसरी जथाभावी दिसापिसा
- उमाशङ्कर द्विवेदी भगवान् रामचन्द्रको परम पवित्र गाथा साक्षात् भगवान् शड्ढरले आफ्नी प्रेयषी आदिशक्ति पार्वतीलाई सुनाएका थिए । यो आख्यान ब्रह्माण्डपुराणको उत्तरखण्ड अन्तर्गत आएको छ । यसमा परम रसायन रामचरित्रको वर्णन गर्ने क्रममा विभिन्नथरीका प्रस· प्रस्तुत गरेर भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति र सदाचारसम्बन्धी दिव्य उपदेश दिइएको छ । विविध विषयहरूको विवरण रहेपनि यसमा प्रधानता अध्यात्म तत्त्वको विवेचन रहेको हुनाले नै यसलाई ‘अध्यात्म रामायण’ भनिएको छ । अध्यात्म रामायण मूलत: संस्कृत भाषामा रहेको भएपनि विभिन्न कालक्रममा यो विभिन्न लोकभाषाहरूमा पनि भावानुवाद, शब्दानुवाद, छायानुवाद जस्ता अनुवादहरू गरिएका पाइन्छन् । यहाँ भानुभक्त आचार्यद्वारा अध्यात्म रामायणको नेपाली भावानुवाद तथा मुकुन्द आचार्यद्वारा भानुभक्तीय अध्यात्म रामायणको भोजपुरी भाषामा शब्दानुवादको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । अयोध्याकाण्डको एउटा प्रस·को मूल अध्यात्म रामायणको संस्कृतका श्लोकहरू निम्न छन्– इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्रुपरिप्लुत: । उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यहम् ।। रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि र
मानिस आफ्नो भाग्यको निर्माता हो । आफ्नो उत्थान र पतन उसको वशको कुरा हो । यो तथ्य जति साँचो छ, त्यति नै साँचो के पनि हो भने वातावरणको प्रभाव मानिसमाथि पनि पर्दछ र उसको व्यक्तित्वबाट परिवार एवं समाजको वातावरण पनि प्रभावित हुन्छ । नराम्रो वातावरणमा रहेर कदाचित कसैले आफ्नो विशिष्टता साँच्न सक्छ, साथै यो सत्य हो कि वातावरणको प्रभाव पनि नपरी रहन सक्दैन । धेरै समर्थ मानिसको क्रियाकलापले नै वातावरणको निर्माण हुन्छ । बहुसङ्ख्यक भएर एकैनासका गतिविधिहरू अँगाल्दा दुर्बल स्थितिका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो एउटा विशेष प्रकारको अवस्था सिर्जना गर्दछन् । व्यसनी, अनाचारीहरूको समुदायले पनि यस्तो प्रभाव उत्पन्न गर्दछ, जसबाट सामान्यस्तरका मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् । यसकारण राम्रो वातावरणमा रहनु र नराम्रो वातावरणबाट जोगिनु त्यति नै आवश्यक छ, जति स्वच्छ हावामा रहने र फोहर–दुर्गन्धबाट जोगिने प्रयास गरिन्छ । त्यो प्रसिद्ध कथा जसमा एउटा गुँडबाट झिकिएका सुगाका दुई चल्लालाई दुई भिन्न ठाउँमा पालिएको थियो । त्यहाँको परिवेशअनुसार तिनीहरू पालिए । सन्तकहाँ पालिएको सुगाले ‘सीताराम–राधेश्याम’ भन्न सिक्यो भने चोरक
पर्सामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आजदेखि पर्सा जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम लागू गरिएको छ । जिविस, पर्सामा आयोजित बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन कार्यक्रमको पर्साका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमयले उद्घाटन गरेका थिए । उनले सो अवसरमा पर्सा जिल्लाका कुल बालबालिकाको ६० प्रतिशत कुपोषणको शिकार भएको कारण यस वर्षदेखि जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन कार्यक्रम लागू भएको बताए । उनले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रभन्दा नगर क्षेत्रमा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या बढी भएकोमा झनै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रमुख अतिथि बजिमयले राज्यकोषमा सबैभन्दा बढी धनराशि जम्मा गर्ने जिल्लाका ६० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनु लज्जास्पद भएको बताए । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक श्यामराज उप्रेतीले सरोकारवालाहरूको सहयोगबिना कुपोषणविरुद्ध अभियान सफल नहुने बताए । उनले कुपोषण नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला पक्षको भूमिका सराहनीय हुने बताउँदै यसका लागि अभियान चलाउन आग्रह गरे । उद्घाटन समारोहमा बहुपक्षीय पोषण योजना र त्यसको व्यवस्थापन, कार्या
निर्वाचनसम्म आन्दोलनरत दलहरू सहमतिमा आउने नेपालको दाबी
प्रस, वीरगंज, १४ असार/ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी संविधानसभामा एमालेलाई एक नम्बर पार्टी बनाएको खण्डमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । एमाले, पर्साद्वारा पार्टी कार्यालय मनमोहननगर, रामगढवामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आगामी संविधानसभामा एमालेलाई मुलुकको १ नम्बर पार्टी बनाउन आग्रह गरे । उनले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले १ नम्बर पार्टी भयो भने संविधान घोषणा गर्ने दाबी गरे । उनले एक नम्बर पार्टी भएर संविधान जारी गर्न नसके त्यसपछिका निर्वाचनमा एमालेलाई एक नम्बर पार्टी बनाउन अभियान नचलाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । उनले संविधानसभा निर्वाचनसम्म आन्दोलनरत दलहरू सहमतिमा आउने दाबी पनि गरे । सहमतिमा नआए पनि निर्वाचनलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । नेता नेपालले एमालेबाट अन्यत्र प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्दै फर्किनेहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने बताए । उनले एमाले परित्याग गरेर अन्यत्र गएका व्यक्तिको इज्जत–प्रतिष्ठा नहुने हुँदा फर्कन आग्रह गरे । नेता नेपालले एमालेबाट अ
७६ वर्षीय वृद्धको प्रयासबाट गाउँमा ६० लाखको राष्ट्रिय सिंचाइ योजना
प्रस, निजगढ, १४ असार/ सामाजिक कार्य गर्न कुनै राजनीतक दलका नेताको पिछलग्गु नै बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने गतिलो उदारहण दिएका छन्–बारा रतनपुरी–८ लालका ७६ वर्षीय वीरबहादुर जिम्वाले । गाउँमा स्थायी सिंचाइ गर्ने सपना बोकेर गाविसको कार्यालय, जिल्लादेखि मन्त्रालय, विभाग सम्म निरन्तर धाउँदा–धाउँदा ४ वर्षको प्रयासपछि गाउँमा राष्ट्रिय योजना पार्न सफल भएका छन् वीरबहादुर । उनकैं दौडधुपका कारण गाउँमा राष्ट्रिय योजनाको बजेटबाट तीन दिनदेखि डिप बोरिङ धसाउने कार्य शुरु भएपछि वीरबहादुर र गाउँलेहरू खुशी भएका छन् । एक डेढ वर्षअघि गाउँमा आउने योजना राजनीतिक दलका मन्त्रीले अन्तै लगेपछि दु:खी भएका वीरबहादुर पुन: सिंचाइ मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायमा धाएपछि यसपालि सो योजना आएको बताए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला उनका राजनीतिक सल्लाहकार निजगढ निवासी पुरुषोत्तम पौडेलले समेत सो कामलाई महत्त्व दिएपछि मन्त्रालय, विभागमा काम कारबाईले गति लिएको समाजसेवी वीरबहादुर सम्झन्छन् । काठमाडौं र सम्बन्धित निकायमा धाउँदा निजी पैसा खर्च हुँदा घरबाट समेत बेलाबखत भनाइ खानु
- उमाशङ्कर द्विवेदी वारणावत नगर जाने क्रममा वनको बाटो हिड्दै जाँदा पाण्डव तथा कुन्ती थकित भएर वनमैं रूखको सियाँल (छाया)मा भुइँमैं सुत्न पुगे । भीमसेन जाग्राम बसेर उनीहरूको रक्षा गर्न पहरा दिन थाले । पाण्डवहरू सुतिरहेको ठाउँ नजिक एउटा विशाल शालको रूख थियो । त्यसै रूखमाथि हिडिम्बासुर बसिरहेको थियो । ऊ अत्यन्त क्रूर, पराक्रमी तथा मांसभक्षी थियो । उसको शरीरको र· कालो, पहेंलपुरे आँखा र आकृति बडो भयानक थियो । दार्‍ही–जुँगा र कपालको रङ रातो थियो । लामा–लामा दार्‍हाका कारण उसको मुख अत्यन्त भीषण थियो । त्यस बेला ऊ भोको थियो । मान्छेको गन्ध पाएर उसले पाण्डवहरूतिर हेर्‍यो, अनि बहिनी हिडिम्बासित भन्यो–हेर बहिनी, धेरै दिनपछि आज मलाई आफ्नो प्रिय मान्छेको मासु पाउने सुयोग फेला परेको छ । मेरो जिब्रो रसाएर आएको छ । आज म आफ्नो दार्‍हा यिनीहरूको शरीरमा रोपेर ताजा ताजा तातो रगत खानेछु । तिमी गएर यी मान्छेहरूलाई मारेर ल्याऊ अनि हामी दुव यिनीहरूलाई खाई मोज गर्नेछौं । दाइको आज्ञा मानेर त्यो राक्षसी हतार–हतार पाण्डवहरू सुतिरहेको ठाउँमा पुगी । उसले त्यहाँ गएर हेरी–कुन्ती र युधिष्ठिर आदि त सुतिरहेका छन,
अनुमतिबिना प्रवेश निषेध !
–कृष्ण अविरल कक्षा नौमा पनि उनीहरूको सेक्सन अलग भएन । त्यो वर्षको अन्त्यतिर पुगेका बेला विद्यालयमा गाइँगुइँ सुनिन थाल्यो, हत्तपत्त पत्याउनै नसकिने । अनौठो । गाइँगुइँको पछाडि साक्षीको रूपमा एउटा विद्यार्थीको पनि नाम जोडिएको थियो । संयोगले त्यो सुवासकै गाउँको दाइ थियो । दश कक्षामा पढ्ने । नाम गोविन्द भण्डारी । रिस उठेका बेलाको उसको नाम लम्बु थियो । कसै कसैले लामकाने पनि भन्थे । रहस्य के थियो उनीहरू नै जानून् । तर, गाइँगुइँ शुरू भएको ठीक अघिल्लो दिनदेखि उसले गोविन्दलाई बाटामा भेटेको थिएन । नत्र उनीहरू विद्यालय आउँदा–जाँदा प्राय: सँगै हुन्थे । सुनेको कुराप्रति शुरूमा त उसले विश्वास गर्नै सकेन । तर दश कक्षाका दाइ–दिदीहरूले समेत उसलाई एकान्तमा बोलाएर सोध्न थाले,“खास कुरा के हो ?” न देख्नु, न जान्नु १ सुवास विचराले के जवाफ दिन सक्थ्यो ? सोध्ने क्रमले हद नाघ्न थालेपछि उसलाई पनि चर्को खटपटी भयो । खटपटी मेट्ने एउटै उपाय थियो, गोविन्द भण्डारीसँग भेटेर सोध्नु । तर ऊ तीन दिनदेखि विद्यालय आएको थिएन । हद भएपछि एक साँझ ऊ गोविन्दको घरमैं गयो, हतारहतार गृहकार्य गरिसकेर ।
एकाङ्की दृश्य : काठमाडौं वीर अस्पतालको चोक । (पैदलयात्रीलगायत अस्पताल आउने जानेहरूको आवतजावत क्रमश: बढ्दै गइरहेको छ । अस्पतालको मूलगेटदेखि नजिकै सडकपेटीमा एउटी अधबैँशे महिला कसैलाई खोजेजस्तो चारैतिर पल्याकपुलुक हेरिरहेकी छिन् । यतिकैमा अस्पताल छिर्ने गेटैमा उसको एकजना परिचित महिलासित भेट हुन्छ । दुवै प्रसन्न मुद्रामा एकार्काको हात समातेर भलाकुसारीसँगै वार्तालाप शुरू गर्छन् । ) महिला १ : अपुई १ रूपा तँ कता ? महिला २ : तेरो बाजे, म काठमाडौंमा नै छु नि । बरु तँ चाहिँ कता आइस् नि, भन ? महिला १ : मेरो बूढो सरुवा भएर त्रिभुवन विमानस्थल आउनु भा’छ । यसैले म बेलाबेलामा काठमाडौं आउने जाने गर्छु । महिला २ : (मुख महिला १ को कानैमा लगेर सुस्तरी) भिनाज्युले बोलाउनुहुन्छ कि आपैंm आउने गर्‍या छस् ? महिला १ : चुप लाग । तेरो ठट्टा गर्ने बानी अझै गएन है ? ( महिला २ खित्का छाडेर हाँस्छे) अनि तेरो के छ त हाल खबर ? भाइ के गर्दैछ ? छोराछोरी कत्रा कत्रा भए ? कतिमा पढ्दैछन् ? महिला २ : ए १ उसको त कुरै नगरे हुन्छ । कहिले मलेसिया, कहिले हङकङ यसपालि चाहिँ सि·ापुर पुग्नु भा’छ । एक छोरा, एक छोरी
- चन्द्रकिशोर वीरगंजमा यस्तो पनि समय थियो, यहाँ प्रशस्त पुस्तकालयहरू थिए । पुस्तकालय पढ्न जानेहरूको बाक्लो सङ्ख्या थियो । कतिपय पुस्तकालयहरूको वीरगंज बाहिर पनि प्रसिद्धि थियो । अहिले वीरगंजमा पुस्तकालयको अस्तित्व खोज्नुपर्ने अवस्था छ । पुस्तकालय हराउनु भन्ने सवालले एकैपटक कतिपय कुराको उठान गर्दछ । एउटा ब्युँझेको शहरको लागि पुस्तकालयको उपस्थिति अपरिहार्य मानिन्छ । हराउँदै गएको पुस्तकालयप्रति कसैको चिन्ता र चासो देखिंदैन । यसरी खोजीनीतिको कमी वास्तवमा सामाजिक त्रासदि हो । आदर्श पुस्तकालय, अलख पुस्तक भन्ज्याङ, देवकोटा अध्ययन मण्डल, सामुदायिक पुस्तकालय, उद्योग वाणिज्य पुस्तकालयजस्ता चल्तिका पुस्तकालयहरू थिए । आदर्श पुस्तकालय, अलख पुस्तक भन्ज्याङ, देवकोटा अध्ययन मण्डलको आफ्नै भवन थियो । आदर्श पुस्तकालयको भवनलाई त पछि एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलको कार्यालय सञ्चालन गर्नमा प्रयोग गर्‍यो र केही पहिले त्यो भवन भत्कियो पनि । अलख पुस्तक भन्ज्याङमा ताला झुन्डिएको छ, मन्दिर व्यवस्थापनको त्यसप्रति रुचि छैन, पुस्तकहरू हराएका छन् । यस्तै हविगत देवकोटा अध्ययन मण्डलको पनि भएको छ । भवन भत्किएको छ,
भ्रष्टाचारीको जयजयकार: ‘बाहिर बाहिर लोकाचार–भित्रभित्र पोका पार’
- बैद्यनाथ ठाकुर जोकोहीले पनि –‘गल्ती गरे अब आइन्दा यस्तो गर्दिनँ, मलाई माफी दिनुस्’ भन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा क्षमा र माफीलाई बढी महत्त्व दिएर हेर्ने गरिन्छ । वैदिक संस्कृतिमा कसैलाई पनि क्षमा दिनु र कसैले पनि माफी मागेर मुक्ति पाउनु स्वाभाविक र सहज प्रक्रिया रहँदै आएको छ । कुनै घटना दुर्घटना घट्दा समाजमा भद्रभलाद्मी बसेर पञ्चायती गरी गल्ती गर्नेलाई माफी मगाएर मुद्दालाई सामाजिकरूपमा रफादफा गर्ने चलन निकै पुरानो हो । यस प्रकारको निर्णय प्रक्रियालाई अहिलेसम्म समाजले जोगाएको पनि छ तर एउटा व्यक्तिले बारम्बार गल्ती गर्छ र माफी मागिरहन्छ भने यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । माफीलाई भजाएर खाने मानिसहरू पनि नभएका होइनन् । सधैंभरि प्रतिबद्धता र वचनबद्धता जाहेर गर्ने तर त्यसलाई कहिले पनि पूरा नगर्ने फटाहा महानुभावहरूको हाम्रो समाजमा कुनै कमी छैन । एकजना जँडयाहा जो प्रत्येक दिन जाँड खाएर बबाल मचाउँछ र भोलिपल्ट समाजको अगाडि पुरानो शैलीमा दयालाग्दो गरी माफी माग्छ । केही दिन शान्त रहन्छ, तर त्यो शान्ति लामो समय रहँदैन । ऊ फेरि साँझ पर्नेबित्तिकै आफ्नो सारा प्रत
धेरै विकार छ यहाँ
पाउरोटीमा ऐब रहेको हुँदा एकजना परिवारका तीनजनालाई झाडाबान्ता भयो । पाउरोटी मानवद्वारा उत्पादन हुने हुँदा कम्तीमा त्यसको प्याकेटमा उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, मूल्य, त्यसमा मिसाइएका अन्य पदार्थ इत्यादिको सूची लेखिएको हुन्छ । लेखिएको छैन भने कानुनी प्रावधान अनुसार दण्ड वा जरिवाना भोग्नुपर्छ । यो कुरा पाउरोटीमा मात्र लागू हुँदैन, उपभोग्य जुनसुकै वस्तुको प्याकेट वा राख्ने भाँडोमा लेखिनुपर्ने अनिवार्यता कानुनले गरेको छ । जसले गर्दा उपभोक्ताले खरिद गर्न लागेको वस्तु गुणस्तरहीन छ वा छैन भन्ने चाल पाउँछ । त्यसबाहेक वस्तुको उपयोग गर्दा अस्वाभाविक परिणाम आयो भने उत्पादकमाथि कानुनी कारबाई गर्न सकिन्छ । तर यस्तो वस्तु, जसमा लेख्ने कुनै प्रावधान छैन, त्यो खाद्य वा अखाद्य के हो कसरी छुटयाउने ? हो, यस्तै वस्तुले आज वीरगंज मात्र होइन, नेपाल–भारतलगायत अन्यान्य मुलुक आक्रान्त छन् । उत्पादित वस्तु राख्ने भाँडो, र्‍यापर वा जेमा पनि लेखे अनुसारको गुण त्यस वस्तुमा छैन भन्ने कुरा परीक्षणबाट थाहा हुन सक्छ । तर केही वस्तु यस्ता छन् जसको दैनिक उपभोग हुन्छ, तर त्यसमा खाद्य–अखाद्य के छ भन्ने कुराको भेउ कस
केदारनाथ गएका ४३ वीरगंजवासी ज्यान जोगाई घर आइपुगे
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १३ असार/ भारतको उत्तराखण्डमा चारधाम तीर्थयात्रा गएको वीरगंजको ४३ जनाको टोली भाग्यले साथ दिंदा सकुशल घर फर्केका छन् । केही दिनअघि परेको अविरल वर्षाले गर्दा उत्तराखण्डमा आएको बाढीले सयौं मानिस र करोडौंको क्षति पुर्‍याएको बेला वीरगंजका तीर्थयात्री घर फर्किनु खुशीको खबर हो । “ज्यान जोगियो, सबै पायौं”– जिविसअगाडि खाना पसलका सञ्चालक नगिना साह कानूले बताए । नगिनासहित उनकी पत्नी गिर्जादेवी र कान्छो छोरा राहुल गुप्तासहित ४३ जना जेठ २० गते बसबाट चारधाम यात्रामा गएका थिए । “उताको कुरा नसोध्नुस्, बडो पीडादायक रहयो”–गिर्जादेवीले भनिन्– “हरिद्वार, ऋषिकेश, ग·ोत्री, बद्रीनाथ हुँदै ३१ गते शुक्रवार राति १० बजे केदारनाथ बसबाट पुग्यौं । भोलिपल्ट शनिवार बिहान ४:३० बजे दर्शन गरी गौरीकुण्डमा बास बस्यौं । त्यहाँबाट १२ किलोमिटर पूर्व फाटा भन्ने ठाउँ पुग्दा जानकारी पायौं कि केदारनाथको मन्दिरबाहेक उक्त क्षेत्रको सडक र सम्पूर्ण बस्ती, बसहरू बाढीले बगाएर लग्यो । ग·ा र मन्दाकिनी नदीमा आएको भीषण बाढीले गाडी बगाएको दृश्य देख्दा भगवान्लाई प्रार्थना गरिरहेका थियौं, मन रुँदै
युथ लिगको कार्यक्रममा १५३ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको भ्रातृ स·ठन समाजवादी युथ लिगको स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १५३ जनाले रक्तदान गरेका छन् । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा दुई महिलासहित १५३ जनाले रक्तदान गरेको रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबाबू पटेलको अध्यक्षता एवं केन्द्रीय सदस्य राजेशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा रेखा साह, सुधादेवी, मनोज पटेल, नीरज पाण्डे, राहुल तुल्स्यान, मनोज दास, आशीष हवारी, पवन गुप्ता, राजु गुप्ता, रञ्जन मिश्रा, रमेश कर्ण, तवरेज आलम, मुकेश गुप्तालगायतले रक्तदान गरेको प्रमुख मानन्धरले बताए । रक्तदान कार्यक्रममा केन्द्रका प्राविधिक धीरेन्द्र झा, ब्लडडोनर्स एशोसिएसनका सचिव सरोज खड्काको सहभागिता थियो । रक्त सञ्चार केन्द्रले २०७० सालमा भएको रक्तदानमध्ये आजको कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी सड्ढलन भएको जनाएको छ ।
लोटस कपमा औराह विजयी
प्रस, पथलैया, १३ असार/ बाराको सिमरामा जारी चौथो लोटस कप फूटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिवार भएको खेलमा औराह विजयी भएको छ । नवदुर्गा युवा क्लबको आयोजनामा सिमरास्थित लोटस स्कूलको मैदानमा भएको खेलमा औराहले सिमरा फुलट्रिपलाई ७–० को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । औराहको जितमा कप्तान किशोर थापाले चार गोल गरेका थिए । विजयी टिमका लागी अस्मीत चौधरीले दुई र सञ्जय चौलागाईले एक गोल गरे । प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रवार सूर्य नेपाल र सिमरा पब्लिक इ·लिस स्कूलबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक क्लबका अध्यक्ष हरी चौधरीले जानकारी दिए ।
फाइनलको उपाधि रतनपुरी स्पोर्ट्सलाई
प्रस, निजगढ, १३ असार/ अन्डर १७ नकाउट फूटबल छनोट प्रतियोगिता हिमाल युवा क्लब २०७० को उपाधि रतनपुरी युवा स्पोर्ट्सले हात पारेको छ । हिमाल युवा क्लब निजगढको आयोजनामा बिहीवार सम्पन्न फाइनल खेलमा २ का विरुद्ध ३ गोल गरी रतनपुरी विजयी भएको हो । खेल अवधिभर दुवै टिमबाट २/२ गोल भएपछि टाइब्रेकरबाट खेलको टु·ो लागेको थियो । उपविजेता आयोजक हिमाल युवा क्लबका खेलाडीले २ गोल र विजेता रतनपुरी टिमका खेलाडीले ३ गोल गरेका थिए । खेल अवधिभर दुवै टिमबीच प्रतिस्पर्धात्मक खेलबाट दर्शकहरूले मनोरञ्जन लिएका थिए । आआफ्नो पक्षलाई दुवै तर्फका दर्शकले एकोहारो सर्मथन गरिरहेपछि खेलाडीहरूमा मैत्रीभावका साथ उत्साह जागेको थियो । म्यान अफ दि म्याच रतनपुरी युवा स्पोर्ट्सका आशालाल कुमर, उत्कृष्ट खेलाडी हिमाल युवा क्लबका तीर्थ कुमर र सर्वाधिक गोल गर्ने सोही क्लबका रवि माझी रहेका थिए । उनले प्रतिगोगिता अवधिमा ४ गोल गरेका थिए । मुख्य रेफ्री श्याम लामा, सहायक रेफ्री ब्रिटिश लामा र राम लामा थिए । प्रतियोगितामा १३ टिम सहभागी थिए ।
टी–ट्वान्टीमा त्रिवेणी क्लब विजयी
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १३ असार/ कलैयामा सञ्चालन भइरहेको नक आउट खुला टी–ट्वान्टी प्रतियोगिताको बिहीवार भएको फाइनल खेलमा त्रिवेणी क्रिक्रेट क्लब विजयी भएको छ । टस जितेर बैटिंग रोजेको त्रिवेणीले २० ओभरमा जम्मा ९८ रन बनाएको थियो भने प्रतिउत्तरमा उत्रेका बरियारपुर क्रिक्रेट क्लबले सबै विकेट गुमाएर ७४ रनमा समेटिएका थिए । विजेता र उपविजेतालाई जिविस बाराका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण चापागाईं, तरुणदल बाराका अध्यक्ष लोकेश सिंह, गालोपट्टी बजनीका प्र.अ. रामविश्वास ठाकुर, शिक्षक स·ठनका प्रतिनिधि सुरेन्द्र पासवानलगायतले प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गरेका थिए । प्रथम हुनेलाई चार हजार, दोस्रोलाई दुई हजार पाँच सय, म्यान अफ दि सिरिजलाई एक हजार पाँच सय, बेस्ट ब्याटम्यानलाइ पाँच सय, बेस्ट बलरलाइ पाँच सय नगद पुरस्कार दिइएको थियो । बेलपाती युवा क्लबको आयोजनामा जेठ २५ गतेदेखि बारा र पर्साका १६ क्लबको सहभागितामा शुरु भएको सो प्रतियोगितामा म्यान अफ दि सिरिज अजित घोषित भएको आयोजक संस्थाका राजनकुमार ठाकुरले बताए । फाइनल खेलको उद्घाटन स्थानीय विकास अधिकारी बद्रीकृष्ण शंखदेवले ग
साफ खेलका लागि कुश्ती छनोट प्रतियोगिता
प्रस, वीरगंज, १३ असार/ १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा आगामी अन्तर्राष्ट्रिय कुश्ती प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रव्यापी कुश्ती छनोट प्रतियोगिताको तयारी वीरगंजमा पूरा भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तत्त्वाधान र नेपाल कुश्ती सङ्घको आयोजनामा असार १५ गतेदेखि वीरगंज खेलकुद परिषद्को कभर्ड हलमा छनोट प्रतियोगिता तय भएको नेपाल कुश्ती सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोदकुमार चौरसियाले बताए । प्रतियोगिताको तयारीबारे आज सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउँदै अध्यक्ष चौरसियाले मुलुकभरबाट आउने विभिन्न सात तौल समूहका प्रतियोगीहरूले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र सो प्रतियोगितामा विजयी प्रत्येक तौल समूहबाट एकजनाले भारतमा हुने १२ औं दक्षिण एसियाली खेल अन्तर्गत कुश्ती प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने बताए ।
पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग (१७)– दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक महाशक्ति इन्डोनेसिया
- विश्वराज अधिकारी दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदाउन थालेको राष्ट्र इन्डोनेसियाले यस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगालेको छ, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रले खेलेको छ, उत्तिकै सरकारले पनि खेलेको छ । यसरी इन्डोनेसियाको अर्थव्यवस्था मिश्रित अनि खास किसिमको हुन पुगेको छ, यस्तो भन्नेहरू धेरै छन् । केहीको मतमा भने, इन्डोनेसियाले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगालेको छ । इन्डोनेसियाले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगालेको छ भन्नेहरूको तर्क अनुसार यो मुलुकले सोहार्तोको शासन समाप्तिपछि सन् १९९८ देखि नै पूँजीवादी बजार अर्थव्यवस्था ९ऋबउष्तबष्कित :बचपभत भ्अयलयmथ० अँगालेको हो । अन्य मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बजार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो । यो समयपछि दु्रतगतिमा यो मुलुकले आर्थिक विकास गर्न शुरू गरेको हो । इन्डोनेसियाको अर्थव्यवस्थाका विशेषताहरूलाई केलाउँदा, यो मुलुकले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको देख्दा र खासरूपमा यो मुलुकले निर्यात क्षेत्रमा उल्लेखनीय किसिमले प्रगति गरी छोटो समयमा नै धेरै ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेक
उपेक्षामा पर्यटन विकास गुरुयोजना
- शीतल महतो विश्वकै बृहत् प्रजातान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारत र साम्यवादी सिद्धान्त अँगालेको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक प्रगति विश्वकै लागि उदाहरणीय छ । तर, यी दुई ठूला र समृद्ध छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेर पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अत्यन्त धनी मुलुक नेपाल झन्झन् गरीब बन्दै गएको छ । यसको एउटै कारण छ, त्यो हो– नेपालले बजार सुधार र गाउँमुखी पर्यटन उन्मुख आर्थिक क्रान्तिको जगलाई बलियो बनाउन नसक्नु । विश्वमा राजनीतिक क्रान्तिसँगै सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि थुप्रै राजनीतिक क्रान्तिहरू त भए तर त्यो सँगसँगै ग्रामीणमुखी आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति हुन सकेन । फलस्वरूप मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेन । विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त र ठूलो योगदानकर्ताको रूपमा आज पर्यटन व्यवसाय अगाडि आएको छ । यस व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि यस क्षेत्रमा पर्यटकीय बजारीकरणका नवीन सूत्रहरू अ·िकार गरिंदै छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मानव जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन र समाज एवं राष्ट्रलाई आर्थिकरूपले समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आज सबै वर्ग र क्षेत्रले स